Faah faahin:- Dagaalyahanada Al-shabaab oo muddo saacado ah xalay la wareegay degmada Afgooye – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaalyahanada Al-shabaab oo muddo saacado ah xalay la wareegay degmada Afgooye
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa weerar aad u xoogan oo ay dagaalyahanada Al-shabaab habeenkii xalay ku qaadeen degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose.
Dagaalkaasi oo muddo saacado ah socday ayaa la sheegayaa inuu yimid kadib markii dagaalyahanada Al-shabaab ay weerar balaaran kusoo qaadeen fariisimo ay ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ku leeyihiin degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose.
Dagaalyahanada Al-shabaab ayaa dagaalkaasi kadib u suurto-gashay inay gudaha u galaan degmada Afgooye, iyadoo muddo saacado ah ay degmadaasi is-qabsaday rasaas xoog leh oo is-dhaafsanayeen ciidamada huwanta ah iyo dagaalyahanada Al-shabaab.
Dhinaca kale, dagaalyahanada Al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkii xalay uu ahaa mid qorsheysan islamarkaana ay kula wareegeen degmada Afgooye, waxayna sheegeen inay weerarkaasi ku dileen ilaa 5 skari, kadibna ay isaga baxeen.
Sidoo kale, lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi, marka laga reebo sheegashada ay Al-shabeeb sheegteen inay dileen 5 askari.